❤️ Tsy mamela ahy hiditra ny Instagram : Torolàlana fanamboarana - Winches Club
Instagram dia sehatra media sosialy matanjaka, ampiasain'ny olona an-tapitrisany isan'andro handefa sary sy horonan-tsary mamorona ary hijerena izay tanjon'ny namana sy ny fianakaviana olona manan-kery. Orinasa maro koa no mampiasa ny tranokala hizarana atiny amin'ireo mpanaraka azy sy hampitombo ny orinasany..
Tena mahasosotra anao ny tsy mifandray amin'ny anao Kaonty Instagram, fa ny marina dia olona maro no miaina an'io toe-javatra io isan'andro. Betsaka ny fanazavana azo atao momba an'io trangan-javatra io.
Mpanan-kery maro, mpandraharaha sy orinasa mampiasa Instagram ho sehatra fandraharahana. Rehefa tsy afaka miditra amin'ny kaontiny izy ireo, afaka mampihena ny hetsika ara-barotra izany, fisian'ny media sosialy ary fidiram-bola mihitsy aza.
Soa ihany, mazàna dia misy fanamboarana mora ho an'ny ankamaroan'ny olana. Ao amin'ity torolàlana ity, hahita fampahalalana momba ny fomba hifandraisana amin'ny kaontinao Instagram ianao.
Hafatra hadisoana amin'ny fifandraisana Instagram
Raha mahazo hafatra diso ianao mampahafantatra anao fa tsy nahomby ny andrana nataonao, ny safidinao voalohany dia ny mampiditra ny teny miafinao ary manandrana indray. Raha tsy mandeha izany, midika izany fa misy olana hafa amin'ny kaontinao.
Rehefa tsy nahomby ny andrana nataonao, mety hahazo iray amin'ireo hafatra hadisoana isan-karazany ianao, indraindray mivantana amin'ny telefaona anao ary indraindray mankany amin'ny mailakao. Tsy misy olona te handray hafatra diso tsy ampoizina, fa ny tombony dia ity hafatra ity dia manome anao ny antony tsy nahombiazanao nifandray.
Ireto misy sasany amin'ireo fampandrenesana momba ny tsy fahombiazan'ny fidirana matetika ao amin'ny Instagram:
miala tsiny, nisy olana tamin'ny fangatahanao.
Anarana Tsy hita ny mpampiasa Instagram.
iSIKA tsy afaka miditra ao amin'ny kaontinao.
Mba miangavy re zahao ny anaranao ary manandrama indray.
AMIN'I adino ny teny miafina momba “Anaran'ny mpampiasa” ?
Ilay anarana ny mpampiasa nampidirinao dia tsy an'ny kaonty.
Alohan'ny handinihantsika ny fomba hamahana ireo olana ireo, Andeha hojerentsika aloha ny mety ho antony mahatonga ny lesoka. Ny hafatra diso ao amin'ny Instagram matetika dia manome anao fanazavana tsara momba ny antony mety mahatonga ilay olana sy ny vahaolana..
Ny antony mety mahatonga ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana
Ny antony mahazatra indrindra amin'ny tsy fahombiazan'ny fidirana dia satria diso ny tenimiafinao, izay mitranga matetika tokoa. Mety ho typo tsotra izany, ny lesoka fidirana (sora-baventy na sora-baventy), na teny miafina diso mihitsy aza. Hamarino raha marina ny teny miafinao, ary raha olana tenimiafina io, ampiasao ny rohy fandefasana teny miafina nomen'i Instagram.
Ny lesoka amin'ny fidirana Instagram matetika dia vokatry ny fidirana voalohany amin'ny fitaovana vaovao. Rehefa tsy eken'ny sehatra ilay fitaovana ampiasainao, mety hanakana anao tsy hiditra izany mandra-panaovanao fanamarinana fanampiny.
Na dia toa sarotra sy tsy ilaina aza io fomba io, dingana fiarovana lehibe io. Raha misy manandrana mamaky ny kaontinao Instagram amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny fitaovany manokana, ity dingana ity dia afaka nanakana azy. Ny fanamarinana fanampiny dia miantoka ny fiarovana sy tsiambaratelo momba ny kaontinao voatahiry.
Ny olana mifandray amin'ny fitaovana hafa dia misy ny fampiasana fitaovana taloha izay tsy manohana intsony ny fampiharana Instagram, ary koa ny fametrahana daty sy ora tsy mety amin'ny fitaovana.
Indraindray, ny olana momba ny fahatsiarovana na ny fampiasa amin'ny findainao amin'ny findainao dia mety hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ny fampiharana. Ny data sy ny fifandraisana Wi-Fi no mety homena tsiny, ary na ny iray dia mety hiteraka olana amin'ny fifandraisana eo amin'ny fitaovanao sy ny mpizara Instagram.
Ny antony farany mety tsy hahombiazan'ny fidirana dia manakana na mamafa ny kaontinao Instagram.. Mety ho nataonao izany, na tsy nahy aza. Azo heverina koa fa nisy olona nijirika ny kaontinao na nanana antony hanakanana vonjimaika ny anao ny sehatra Instagram fidirana amin'ny kaontinao.
Torolàlana momba ny fomba hifandraisana indray amin'ny kaontinao Instagram
Izao no fotoana hijerena ireo vahaolana amin'ny tsy fahombiazan'ny fidirana Instagram. Raha vantany vao nahazo hafatra diso ianao ary manana hevitra momba izany, azonao atao ny manandrana ireo fomba etsy ambany.
Ny maro amin'izy ireo dia fanamboarana haingana, fa ny sasany mety mila fotoana kely sy ezaka kely hamantarana ny olana ary hahita vahaolana. Mety mila mifandray amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa Instagram ianao na mitady fampiharana ivelany hanampy anao..
Ireto ny sasany amin'ireo fanamboarana haingana izay afaka manampy anao hamaha ny olana:
Mialà sasatra kely ary avereno diniho ny tenimiafinao
Raha nanandrana niditra indray ianao miaraka amin'ny teny miafina, ny fialan-tsasatra dia afaka manampy anao hahatadidy zavatra momba ny teny miafinao. raha tsy izany, ampiasao fotsiny ny rohy fandefasana teny miafina ao amin'ny Instagram.
Alefaso sy vonoy ny fitaovanao
Ny famerenana indray dia fanamboarana haingana izay mandeha tsara matetika. Izy io koa dia afaka mamaha ny olan'ny fifandraisana eo amin'ny fitaovana sy ny mpizara fampiharana.. Matetika, rehefa mampiasa be loatra ny fitaovantsika, fampiharana mety manomboka tsy mandeha amin'ny laoniny, koa andramo aloha ity dingana ity.
Zahao ny fifandraisanao
Raha tsy mandeha ny angona findainao na Wi-Fi anao, tsy afaka miditra ianao. Matetika, tsy mandeha ny fifandraisanao nefa tsy tsapanao akory. Ny fifandraisana malemy na tsy tapaka dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahafahanao mifandray.. Azonao atao ny mamerina ny router Wi-Fi anao raha manana hafatra diso momba ny fifandraisana amin'ny mpizara ianao.
Vaovao farany ny ora sy ny daty napetraky ny fitaovanao
Mety ho amin'ny fitaovana vaovao na hafa ianao miaraka amina fotoana sy daty tsy mety apetrakao. Azo atao koa ny manova ireo toe-javatra ireo amin'ny fitaovana mahazatra anao.. Ireo lesoka ireo dia misy fiantraikany amin'ny fahafahanao miditra ao amin'ny Instagram. Hamarino raha marina ny toe-javatra ary havaozy raha ilaina. Ny fomba tsara indrindra dia ny misafidy hanavao ny fotoana sy ny famaritana daty.
Hamafana ny cache sy data-n'ny fampiharana
Raha avy amin'ilay rindrambaiko ihany ny lesoka, matetika manadio ny cache dia afaka manamboatra ny olana. Amin'izay, mila mandeha any amin'ny toeran'ny fitaovana ianao. Ao amin'ny fikirana fampiharana, afaka misafidy Instagram ianao ary misafidy ny safidy hanafoanana ny cache sy data. Azonao atao koa ny manandrana miditra amin'ny PC-nao na fitaovana hafa hahitana raha afaka miditra amin'ny kaontinao any ianao..
Ny vahaolana momba ny fifandraisana Instagram voalaza etsy ambony dia ny sasany amin'ireo mora indrindra sy haingana indrindra manodidina.. Ny ankamaroan'ny olana dia azo vahana amin'ireo. Raha mbola tsy afaka miditra amin'ny kaontinao ianao, mety mila vahaolana mandroso kokoa ianao.
Avereno ny teny miafinao
Azonao atao ny manandrana mamerina ny teny miafinao raha tsy tadidinao ny marina.. Afaka minitra vitsivitsy, fa mandeha tsara io matetika.
Vaovao farany ny fampiharana
Vahaolana iray hafa azonao andramana ny fanavaozana ny fampiharana. Rehefa lany andro ny fampiharana anao, tsy manao araka ny tokony ho izy intsony ary tsy manana ny endri-javatra sy fiasa farany.
Midira amin'ny kaontinao Facebook
Azonao atao koa ny manandrana miditra amin'ny kaonty Facebook anao. Raha tsy mahomby ireo andrana rehetra ireo, ny mety indrindra azonao atao dia ny mifandraisa amin'ny Instagram ary angataho izy ireo hanampy anao hamaha ny olan'ny kaonty.
Lahatsoratra teo alohaAhoana no hahafantarana raha nisy nanakana anao tao amin'ny Instagram
Lahatsoratra manarakaRahoviana no fotoana tsara indrindra handefasana amin'ny Instagram ?